Uhlobo Cap / clsi I High Pure Factory Water, Suppliers | China Cap / Udidi clsi I High Manufacturers Water Pure
ekhaya» Products » Equipment laboratory » Systems kwamanzi » Cap / CLSI Uhlobo I kwamanzi acocekileyo
inkqubo Smart rob unako ukuvelisa Cap / CLSI Udidi I reagent amanzi analyzer.It lwezonyango yenza uqhagamshelwano ngqo kunye nokusebenza intanethi. Independent manual ephuma ulawulo isetyenziselwe izicelo ezongezelelweyo.
Pureforce ibhadi (30,70,100L / h)
Philisa Force iphuhlise imodeli Pureforce nebhadi, ngokukodwa isisombululo aphezulu amanzi inzima kwiilebhu. Ukufaka kunye imodyuli electrodeionization, Pureforce nebhadi, unako gqolo kubonelela uhlobo II ngamanzi okuhlamba
Pureforce ibhadi (150,300,500L / h)
Pureforce ibhadi kucwangcisa i nemigangatho umgangatho, uyilo kunye ezintsha avela lilifa iminyaka emininzi yamava kwi GhostScript ezisembindini amanzi elebhu.
Pureforce ibhadi inika amanzi feed kwizinga eliphezulu analyzers ezininzi ngokuzenzekelayo zengqo- ngaxeshanye nge unikezelo loop